ညီလင်းသစ်: အာရုံများ ပျံသန်းရာ နိုင်ငံကလေးသို့ (၂)
Posted by ညီလင်းသစ် au 21.3.12
ဒီတခါတော့ မြန်မာဘီယာမသောက်တော့ဘူးပေါ့ :P
အင်းလျားလိတ်က အခန်းတွေက ကျယ်ကျယ်လွင့်လွင့်နဲ့မို့ကြိုက်တယ်။ ခရီးအစပဲရှိသေးတယ် လိုက်ပြီးရင်ခုန်နေမိပြီ။ ကိုညီ မြန်မြန်လေးတင်ပါ :)
Good post! waiting for continuous post. By the way, Tiger brand Chinese tea was not hot, is it? I saw many water drops on the cup. :P
သားသားတော့ ပူနေတော့မယ်... ရန်ကုန်မှာက ဆောင်းတွင်းတောင်ပူနေတာ ... ဟိုတယ်မှာ တည်းတယ်ဆိုတော့ ခြင်တော့ သိပ်မကိုက်လောက်ဘူးလို့ မျှော်လင့်တယ်..
ဓါတ်ပုံတွေ လှလိုက်တာ.. ကျားတံဆိပ် ရေနွေးကြမ်းဆိုတာကိုတော့ တော်တော်သဘောကျသွားတယ် :D
ကိုယ်စားပျော်ပေးနေပါတယ် သားသားကလည်း ချစ်စရာကောင်းလိုက်တာ မအိမ်သူ ကိုလည်း မြင်ဘူးချင်တယ် မန္တလေး ဘက်ရော မလာလည်ဘူးလား နောက်တခေါက်ဆို လာခဲ့ပါနော် ကျားရေနွေး ကြမ်း တိုက်မယ် သားသားကို မြန်မာပြည် ချစ်တတ်အောင် သင်ပေးပါ
ဆိုက်ကားပေါ်ကသားလေးက ချစ်စရာကောင်းလိုက်တာ... ရန်ကုန်ကဟိုတယ်တွေထဲမှာ အင်းယားလိတ်ကိုအကြိုက်ဆုံးဘဲ...
I agree with Ma Shwe Sin Oo, please teach how to love Our Country ,in Singapore i got see many myanmar family they never teach to their kids myanmar language, how to pray, how to love our own country.
ဒီတခါတော့ အစားအသောက်ပုံတွေထက် အင်းလျားလိတ်ဟော်တယ်ခန်းကနေရိုက်တဲ့ ရှုခင်းတွေကို ပိုပြီးလွမ်းသွားတယ် သားသားကဆိုက်ကားစီးပြီး ဘာပြန်ပြောလဲ ဟင် ကျမသမီးတော့ မြင်းလှည်းရယ် တုတ်တုတ်ရယ်စီးပြီး တအားခုန်တာကို သဘောကျလို့ မြင်းလှည်းပေါ်ကနေတောင် မဆင်းချင်ဘူးလေ.. ရက်အစဉ်တွေထက် ဓါတ်ပုံနဲ့ဆက်စပ်တင်တာ ပိုကောင်းမလားလို့ အို ဘယ်လိုဘဲတင်တင် တ၀ကြီးဖတ်ရ ကြည့်ရ လွမ်းရ၇င် ပြီးတာပါဘဲ ညီလင်း ရေး) ဆက်စောင့်နေမယ်
ကိုညီလင်းရဲ့ ပုံတွေ စာတွေကိုကြည့်ပြီး...
ဒီနှစ်တော့ ပြန်ဖြစ်အောင် ပြန်ဖို့ တွေးနေမိတယ်...
အင်းလျားလိပ်က အင်တာနက်ကနေ book လုပ်လို့ ရသလားဟင်...း)
တခြားစားစရာတွေလည်း နေရာနဲ့နာမည်နဲ့တွဲပြီး တဝကြီးကြည့်မှတ်သွားပါတယ်...ဒါမှ စိတ်ဝင်စားတဲ့နေရာဆို ကိုယ်လည်း သွားကြည့်လို့ရအောင်လို့
ကျမတုို့ အုပ်စုကညသမားတွေဆုိုတော့ရန်ကုန်မှာတုန်းကအဲဒီရွှေကောင်းဆုိုင်နဲ့ ပြည်လမ်းပေါ်ကကောင်းကောင်းကုိုခဏခဏသွားစားဖြစ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ရွှေကောင်းဆုိုင်းဘုတ်ကုိုတစ်ခါမှသေသေချာချာမကြည့်ဘူးဘူး။ ခုမှတွေ့ တော့တယ်။ဘာသာပြန်ထားတာသဘောကျ သွားပြီ။း))
Thanks for see nice photos & read..
အကုန်လုံးကို တစ်ထိုင်ထဲ ဖတ်လိုက်ချင်တား)
ကိုညီလင်းသစ်ရေ...ပုံတွေ ကောင်းလိုက်တာ။ အဲဒီ အင်းယားလိတ်က သရဲခြောက်တယ်ဆို ဟိဟိ။ သိပါဘူး သူများပြောတာကြားဖူးတာပါး)))
ပျော်စရာကြီးနော်...။ ကြိုက်သလိုသာ ရေးပါလေ...ကောင်းပါတယ်။ အလွမ်းပြေပါတယ်း)
Last time I visited to Ygn was 2007. U make me cry :-((
မြန်မာ ဘီယာလား? အို.. ဘယ်နေလိမ့် မလဲ၊ သောက်တာပေါ့၊ ကျားမြီးဆွဲတာက တခါတလေပါ၊း) ဟုတ်တယ်ဗျ၊ အင်းယားလိတ်က အခန်းတွေ ကျယ်တာအပြင် ဥယျာဉ်နဲ့ ရေကူးကန်က ကလေးတွေ အတွက် အဆင်ပြေတယ်..၊
ha ha ha.. well, that Tiger brand Chinese tea is kind of an ice tea. :D
ဟုတ်တယ်ဗျာ၊ ပူတာတော့ အတော်ပူတယ်၊ ခြင်လား? ဘယ်နေလိမ့် မလဲ၊ ဟိုတယ်မှာလည်း ကိုက်တာပဲ၊ ရန်ကုန်မှာ ခြင်လွတ်ဒေသ ရှိပါ့မလားတောင် မသိဘူးဗျ၊း)
ကျေးဇူးပါဗျာ၊ ဟုတ်တယ်၊ အဲဒီ ရေနွေးကြမ်းက ရန်ကုန်ရဲ့ အပူချိန်ကို တွန်းလှန်ဖို့တော့ အံကိုက်ပဲ..၊း)
ဟုတ်ကဲ့..၊ ဖိတ်ခေါ်တာ ကျေးဇူးပါ အမ၊ ဒီတစ်ခေါက်တော့ အလှမ်းဝေးတဲ့ မန္တလေး ဖြစ်သွားတယ်ဗျာ၊ နောက်တခါတော့ ကြိုးစားပါ့မယ်၊ အမရွှေစင် ပြောသလိုပဲ ကျနော်လည်း သားကို သင်ပေး နေပါတယ်..၊
ဟုတ်ပါတယ်၊ အင်းယားလိတ်က တိတ်တိတ် ဆိတ်ဆိတ်နဲ့ အေးချမ်း တာတော့ အမှန်ပါပဲ..၊
Seng Seng ...
Yes. I got your point and agree with you, too. I find it important to teach and show kids the value of Myanmar language and culture. They should definitely know how to love the country.
ဆိုက်ကားက အရမ်းလှုပ်တယ်လို့ သူပြန်ပြောတယ်၊း)အဲဒါ ဆိုက်ကားကြောင့် မဟုတ်ဘူး၊ လမ်းက ချိုင့်တွေကြောင့်လို့ ပြန်ရှင်းပြ ရတယ်၊ သားလည်း မြင်းလှည်း ကြိုက်တယ်ဗျ၊ ပုဂံမှာ သူက နေ့တိုင်းနီးပါး မြင်းလှည်း မောင်းနေတာ...၊း)
ကောင်းတယ်ဗျာ၊ အဆင်ပြေရင် ပြန်သာပြန်ဗျို့..၊း) အင်းယားလိတ် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်မှာ ဘွတ်ကင်လုပ်ဖို့ function ပါပေမယ့် တကယ်တမ်းမှာ အလုပ် မလုပ်ဘူး၊ ပြီးတော့ ဒါရိုက်ဘွတ်ကင်က ဈေးများတတ်တာလည်း ရှိတယ်လေ၊ ကျနော်တို့ကတော့ ရင်းနှီးတဲ့ travel agency တွေကနေ တဆင့် ဘွတ်ကင် တင်ပါတယ်၊ အသေးစိတ် ဆွေးနွေးချင်ရင် nyilinnthit@gmail.com ကို မေးလ်ပို့လိုက်လေ...နော်၊
ကျနော်လည်း တတ်နိုင်သလောက် မြန်မြန်တင်ဖို့ စိတ်ကူး ရှိပါတယ်..၊ အားပေးတာ ကျေးဇူးနော်..၊
ဒါပေါ့ဗျာ..၊ ဒီလိုပဲ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အတွေ့အကြုံတွေ ဝေမျှရမှာပဲ မဟုတ်လား..၊း)
ကျနော်လည်း တခါတခါ ရန်ကုန်မှာ ညဖက်တွေ အဲဒီလို လျှောက်စားဖူးတယ်၊ happy ဖြစ်ဖို့ ကောင်းတယ်နော်..၊ happy တောင်မှ ရိုးရိုး happy မဟုတ်ဘူး၊ golden happy ကို ဖြစ်တာ...၊းD
Anonymous (3) ...
Thank you for your nice comment..!
ကျနော်ကလည်း ဖြစ်နိုင်ရင် အကုန်လုံးကို တထိုင်တည်း ရေးချင်ပါတယ်ဗျာ..၊း)
သရဲဇတ်လမ်း တွေကတော့ မြန်မာပြည်က ဟိုတယ်တိုင်း လိုလိုမှာ ရှိကြမယ် ထင်ပါတယ်ဗျာ..၊ ကိုယ်တွေ့တော့ တခါပဲ ကြုံဖူးတယ်၊ ဒီ အင်းယားလိတ် မှာတော့ အေးဆေးပါပဲ...၊း)
Anonymous (4) ...
Oh..I am sorry! I didn't mean to ... Please, don't get disappointed! A time to go back will surely come to you, too. Keep the faith, huh!
သားသားရဲ့ အတွေ့အကြုံတွေ၊ ပြန်ပြောတာတွေကို ရေးပေးပါ။
Last night I was waiting for second part of your trip until 12 am in my local time, probably not very different many hours in your local time but I didn't know when you uploaded.
Anyway, I can read right away and make me so sad so far. In fact your writing style and photos are very attractive, I was thinking all the time what will appear next scenes.
Waiting for your continue photos and story.
ကျားတံဆိပ်ရေနွေးကြမ်းဆိုလို့ အဟုတ်မှတ်နေတာ....။ သားက လေးနှစ်ကျော်ဆိုပေမယ့် တော်တော်ထွားလာတယ်...။ ဂဏန်းပျော့ဆိုတာဘာအကောင်လဲအစ်ကို...တကယ့်ဂဏန်းကောင်လား တစ်ခြားအကောင်လား...။ ခပ်စိပ်စိပ်လေးနော်ဗျို့..။
သရဲအကြောင်းလည်း ကြုံကြုံမကြုံကြုံအောင် ပြောပြဘာ..။
နေခွင့်ရတဲ့အချိန်တွေ အိပ်နေလို့ ကုန်သွားမှာ စိုးလို့ ပါ။
မုန့် ဟင်းခါး... ကျမရဲ့ ပထမဆုံး မနက်စာပါပဲ။
အရေးအသားနူးနူးညံ့ညံ့လေးတွေနဲ့ ပုံလှလှလေးတွေနဲ့ တွဲဖက်ကြည့်ရတာ စိတ်ချမ်းသာလိုက်တာ...။
Happy and counting my time though i'm busy.My son also liked to ride tricycle and once he said leave your car there and take me home with it:)I remember your horseshoe leave salad.After checking 3rd time ....ok waiting setyan.
ညီလင်းရေ.. ခုတလော ရန်ကုန်က ပြန်လာတဲ့သူတွေ ပြောသမျှ ရန်ကုန်မှာ သိပ်ပိုက်ဆံသုံးကြတယ်တဲ့ .. အမေရိကကလူတွေ ငိုတောင်ငိုလောက်တယ်ဆိုတာ..။ အဟုတ်ပေါ့..။ တို့တွေများ ပင်ပန်းဆင်းရဲပါ့ :(
ဘိုရုပ်လေးနဲ့ ကလေးလေးနဲ့ ဆိုဒ်ကားလေးကို တွဲပြီးမြင်တော့ သဘောကျမိတယ်.. အစ်ကိုရေ.. အတော့်ကိုပျော်ရွှင်ခဲ့ရတဲ့ ခရီးလေးဖြစ်မှာပဲ...
ဓာတ်ပုံတွေ တကယ်လှတယ် ကိုညီရေ..မြန်မာပြည်ကို လွမ်းသွားပြီ..စလုံးမှာ ဟိုဖက်တိုက်ကနေ ဒီဖက်တိုက်ကို အိမ်ပြောင်းတဲ့ သူငယ်ချင်း တက္ကစီငှားမရလို့ဆိုက်ကားကို တဖူးတယ်..
ဖတ်ရင်းနဲ့ ပြန်ချင်စိတ်တောင် ပေါက်နေပြီ ...း)
I like the photo that Alexy riding trishaw.It has full of Burmese fragrance,yechansin under the tree,the smile and attention of trishaw rider,lovely unblack lane with trees and plants and the curiousity of walk by woman.I'm sure that unseen grandpa's face has full of pleasure:)
ဟော့ပေါ့အိုးကြီးထက် ပြည်ကြီးငါးနဲ့ ဂဏန်းပျော့က တော်တော်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်
ရိုက်တဲ့သူကလည်း လှလှပပ စိတ်ဝင်စားချင်စဖွယ် ရိုက်တတ်တာကိုး
ပြည်ကြီးငါးသုပ်ဆို ကြည့်ရင်းနဲ့ ပါးစပ်ထဲမှာ သွားရည်တွေ ပြည့်လာတယ်။
လည်ချင်တာတွေလည်ရနဲ့ တကယ့်ကို ကျေနပ်စရာပါလား ကိုညီလင်းသစ်.
မြန်မာပြည်မှာ ဆင်းရဲမွဲတေနေသူတွေ များပေမဲ့ သုံးနိုင်ဖြုန်းနိုင်သူတွေလည်း ရှိနေကြတယ်နော်။
လူတိုင်းအဲလို သုံးနိုင်လာရင်တော့ သိပ်ကောင်းမှာဘဲ
ကြောင့် ဒီနေ့မှ ၂ပို့စ်ပေါင်းဖတ်ရတယ်...။
ဘာပဲပြောပြော အကို့ကို ကွမ်းနံလေးနဲ့ မြန်မာပြည်
အပိုင်း၂ပို့စ်မှာတော့ ဆိုက်ကားနဲ့သားသား ပုံကို
လို့ မတွေ့လိုက်ရတာနာတယ်ဗျာ...။နို့မို့ အကိုနဲ့
သွားရည်ကိုယိုသွားတာပဲ ကိုညီလင်းသစ် မနက်စာသွားစားမှ ဖြစ်တော့မယ်။ မြန်မာပြည်မှာ ဘယ်လောက်သွားကြာခဲ့လဲ။
အစ်ကို့ ရဲ့ မြန်မာပြည် အပြန်ခရီးလေးက ကြည်နူးဖွယ်ပါဘဲ... ဆက်ရန်ကို မျှော်နေပါ့မယ် အစ်ကို...
လွမ်းဆွတ်ဖွယ်ရနံ့တွေနဲ့ ပိုစ့်လေးပါဗျာ။ ပြန်ချင်စိတ်ပေါက်လာပြီ။ (သားသားက ချစ်စရာကောင်းတယ်ဗျာ။)
အိမ်အပြန်ခရီးက ခမ်းနားစွာနဲ့ လှပနေတာပါပဲ ကောင်းတယ်ဗျ ။ သားသား ဆိုက်ကားစီးတာလေးတွေ့ပြီး ကျနော်လည်းစီးချင်စိတ်ဖြစ်မိပါရဲ့း)
ပထမဆုံး ပြန်ကြိုနေမယ့် ရန်ကုန်မနက်ခင်းကို ခံစားလို့ရတယ်။ ဂဏာန်းပျော့ဟင်းလည်း စားချင်ပါရဲ့။ တခုထဲသာရွေးဆိုရင်တော့ အမေ့လက်ရာကိုပဲ ပိုမက်မောတယ်ဗျာ။
အပိုင်း ၃ကို ဆက်ပြီး ခံစားလိုက်ပါအုံးမယ်။
ဆိုက်ကားစိးပြိးဘယ်လောက်တောင် ပျော်နေမလဲ တွေးမိတယ်..။ ပုံတွေကလည်း ထုံးစံအတိုင်း ကောင်းမှကောင်း။
စာအကြွေးတွေ လိုက်ရှင်းနေတာ ကိုညီလင်းသစ်ရေ...
အခုလို နောက်ကျမှဖတ်တော့လည်း ဆက်ရန်တွေ စောင့်စရာမလိုတော့ဘူး .. ဆက်တိုက်ဖတ်သွားရုံပဲ...